ဆူဆူညံညံဂီတသံလိုထည့်ထားတဲ့ ဆဲလ်ဖုန်းထဲကဖုန်းခေါ်သံကြားလို့ ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်
လိုက်ရင်း ဧရိယာကုဒ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်မြို့ကမဟုတ်ဘဲ တခြားမြို့တစ်မြို့ကတစ်
ကဖုန်းထဲကနေ ”ဟဲ့…..နင်ကပုသိမ်ကမဟုတ်လား!”တဲ့..”ဟုတ်တယ်လေ မ…..ရယ် ကျနော်
တုန်းက ကို….ရယ် ကို…..တို့နဲ့အတူတူမဟုတ်လား! အေးဟုတ်တယ်လေညီလေးရာ..ဒါနဲ့မင်း
လမ်းက ဦး……တို့ဘေးအိမ်ကကျနော်တို့အိမ်ပေါ့..အကိုအဲဒီတံတားကြီးလမ်းက ဦး…….ကို
ကျနော် ”သစ်ကောင်းအိမ်” ဆိုတဲ့ကလောင်နဲ့ကဗျာတွေရေးပါတယ်အကို…”ဟာ..သစ်ကောင်း
အကိုအဲဒီဘလော့ကတော့ကျနော်အမေရိကားရောက်ပြီးမှ ဒီက ကိုဇာနည်ဝင်း လုပ်ထားပေး
တာ လောလောဆယ်တော့ကျနော်လည်းဘာမှဆက်မလုပ်နိူင်သေးဘူး သေသေချာချာလေ့
တာဗျူးမေးခွန်းတွေမေးသလိုမေးပြန်ပါတော့တယ်..အောင်ခိုင်မြင့်က ကနေဒါမှာ သူလည်းဘ
တင်တယ်။ အကိုကတော့လောလောဆယ် ဖော့ဝိန်းမှာဘဲနေတယ်.အေဂျင်စီတစ်ခုမှာအလုပ်
ဆောင်းယွန်းလ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့ကွာ…ဟာ..အကိုက ဆောင်းယွန်းလ လား!ဆိုပြီးသူကဒီ
ပြည်ပြန်ရောက်သွားပြီး လူအိမ် ဆိုတဲ့ကလောင်နဲ့ကဗျာတွေရေးနေတယ်လို့ကြားတယ်.ဟုတ်
လားကွ! လို့ ကျနော်ကသူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တော့…ဟုတ်တယ်အကို...ကို……က လူအိမ် ဆိုတဲ့
သစ်ကောင်းအိမ် နဲ့ကျနော်အလာပသလာပတွေပြောနေကြရင်း ကျနော်ကသူ့ကို ”မင်းအားရင်
များကြီးပြောကြတာပေါ့” လို့ ပြောလိုက်တော့ ကျနော်ကြိုးစားပြီးလာခဲ့ပါ့မယ်လို့ကျနော့်ကိုပြန်
သစ်ကောင်းအိမ် နဲ့ဖုန်းထဲမှာစကားပြောပြီးသွားတဲ့အခိုက်အတန့်ခဏတာမှာ ကျနော့်ခေါင်းထဲ
သစ်ကောင်းအိမ် တို့လိုကျနော်တို့ဗမာပြည်ကနေတောခိုလာတုန်းက ကျန်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေ
ကျနော်တို့တောခိုလာခါစကနယ်စပ်မှာ ပြည်ချစ်ဟောင်းတွေကိုတွေ့ရင် သူတို့ညံ့ခဲ့ကြလို့ ငါတို့
လို့များတွေးနေကြဦးမှာလား! အဲဒီတုန်းကတော့ကျနော်တို့စိတ်ထဲမှာ သူတို့တတွေအဆုံးမ
တိုက်ပွဲတွေဝင်လာခဲ့ကြတာ အခုဆိုရင် အနှစ်နှစ်ဆယ်တောင်ကျော်လာခဲ့ပါပြီပေါ့.ရွှေပြည်
တော်ကြီးကတော့မျှော်လေဝေးလေဖြစ်လာခဲ့ရရင်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်တောင် တတိယနိူင်ငံမှာ
ခုတော့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို ပြန်မရနိူင်တော့ဘူး…
Posted by ဆောင်းယွန်းလ at 2:24 PM
ဒီလိုဘဲ ကြိုးစားကြတာပေါ့ အကိုရေ၊ ကဗျာလေးက
အင်း.. တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ရင်မောစရာ ရင်လေးစရာကြီးပါပဲဦးရာ.. ဒီလိုပဲပေါ့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ ဆက်လုပ်ကြရမှာပဲ။ အားပေးတယ်...
တူညီတဲ့ ခံစားချက်တွေပါပဲ ညီရေ့...
တို့တွေ ညံ့ကြတာလဲ တစိတ်တပိုင်းပါမှာပါပဲ...
ကျန်တဲ့ အချက်တွေကလည်း တစိတ်တပိုင်းပေါ့လေ...
၅၀/၅၀ လို့ပဲ စိတ်ထဲမှာ မှတ်ချက်ချထားတယ် ညီရေ့.....
ကဗျာလေးကို လာခံစားရင်းနဲ့ .......
အင်း ........ထပ်တူထပ်မျှပါဘဲ ကိုဆောင်းယွန်း ..... ရေ
သမိုင်းဆို တာ...နှစ်ပေါင်း ၂၀ နဲ့..ပြောင်းလို့ ရမယ် မယ်လို့... မျှော်လင့်ချက် ကြီး နဲ့..စိတ်မပျက် သင့် သလို..
နောက် ပေါင်း ၂၀ ရယ် လို့ လဲ...အားမလျှော့ သင့်ဘူး ထင် တာပဲ...
တို့ အားလုံး ရဲ့...တာဝန် က...Be Ready & Be Alert
ကြက်ဥအရောင်..တိမ်တောင်သဖွယ်....ဆိုတဲ့အတိုင်း...အားလုံး ရဲ့ ဆန္ဒတွေ ထပ်တူကျမဲ့ အချိန် တစ်ချိန် ဟာ..တို့တွေနဲ့..အနီးဆုံး မှာ ရှိမနေဘူး လို့ ဘယ်သူ ပြောနိုင်မလဲ.....
ဆရာ လုပ်တာ မဟုတ် ဘူးနော်..
တချိန်လုံး ပဲ..စိတ်ပျက်နေရင်..ရှေ့ ကို ဘယ်လို ဆက်လျှောက် ကြမလဲ....
ကဗျာကောင်းတယ်ကိုဆောင်း။ ကိုဆောင်းလက်က ကြာလေကောင်းလေပဲဗျာ။ ကျနော့်ကွန်ပြူတာ ဗိုင်းစ်ရပ်ထိသွားလို့ မရောက်ဖြစ်ဘူး။ အမေရိကားဗိုင်းစ်ရပ်က ပိုပြင်းသလားမသိဘူး။ မဖတ်ရသေးတဲ့ ကဗျာတွေ ဖတ်သွားတယ်။ ခင်မင်စွာဖြင့်..
ကြောင်ဖါးတွေ၊ အစွန်းရောက်တွေကိုလဲ ထည့်တွက်ရမှာပေါ့ဗျာ
နောက်အနှစ်နှစ်ဆယ်စာကို တွေးနေတာကပဲ တော်လှပါပြီ။ ဆက်တွေးရင်း ဆက်လျှောက်ကြတာပေါ့။
ဂဏန်းလို လွယ်အိတ်လို လူတွေ တော်လှန်ရေးမှာလဲ အများသားလား? ငါကိုယ်တိုင်လဲ စောင်းငန်း စောင်းငန်း နဲ့ပဲလေ .... တို့တော်လှန်ရေးက ထူးဆန်းတယ် ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးက သူဋ္ဌေးတွေ ပညာတတ်တွေ လူ့ဘဝထဲ ခုန်ဆင်း ဝင်လာခဲ့တယ်၊ တို့တော်လှန်ရေးက လူမွဲကြောင်ဖါးတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီး ချမ်းသာသွားကြတယ် အဲဒီမှာ ကတဲက ပွဲ ပြတ်နေပြီ၊ အားနာလို့ ရန်သူ့အားရ မဖြစ်အောင် မပြောကြပေမဲ့ အနှစ် ၂၀ဆိုတာ သန်း၆၀ လူထုရဲ့ နိစ္စဓူဝ ... နဲတဲ့ ဒုက္ခတွေနဲ့ နေ့စဉ် သီကုံးထားလေ ရော့သလား? အို ... အသင် ! ရဲဘော်...။
အစ်ကိုရေ ညီမမသိမမီလိုက်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ပြန်ကြားရတိုင်းမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တွေ၊ တော်လှန်ရေးအတွက် အနာဂါတ်ပျောက်သွားရတဲ့ လူငယ်တွေအားလုံးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဘယ်တော့များ ငါတို့ဘက်ကအနိုင်ရပါ့မလဲလို့တွေးမိ တာလည်းအကြိမ်ကြိမ်ပဲ။ ငါတို့အသက်ရှင်နေတုန်းမှာ ဒီအခြေအနေတွေပြောင်းလဲပါ့မလားလို့လဲခဏခဏ တွေးမိတယ်။ စတေးလိုက်ရတာတွေကသိပ်များနေပြီ။
အစ်ကိုနဲ့ ထပ်တူ ခံစားသွားတယ် အစ်ကိုရာ။